हाम्रो स्थानीय सरकार अनि सिंहदरबार को अधिकार घरघरमा भन्ने भ्रमवादी विचार वास्तविकतामा जनता सक्षम भएकै हुन् त अधिकार लिन र स्थानीय स्रोत र साधनको उपभोग गर्न? जनमानसमा उब्जिएको प्रश्न ?बुझाइ मा स्थानीय सरकार जनताको मलम पट्टी लगाउने र आफ्नै स्थानबाट सेवा सुविधा भोग गर्ने आफ्नो गुनासो आफ्नै जनप्रतिनिधिले पूरा गर्ने थियो। तर समय र परिस्थिति विश्लेषण गर्दा यो पो भयो । हुनेखानेलाइ झन् सक्षम बनाउने र क्षमता र दक्षता नभएका टिकेवालहरूलाई भर्ना गर्ने, साझा सोचलाई परास्त गर्दै आडम्बरी राजनीति गर्ने कलङ्कहरूको अखडा, त्यही हो जनताको सरकार ?
यो जनताको प्रश्न हो । हिजो जनप्रतिनिधि नहँुदा कर्मचारीले खत्तम पारे भन्ने आवाज बुलन्द पार्ने नेता गणहरू जनतालाई भन्दिनुस् तपाईंले कति साझा सवालका काम गर्नुभयो ? कति व्यक्तिवादी ? यो पनि स्थानीय जनता जान्न चाहान्छन् । काम गर्ने विचारलाइ समेत अंकुश लगाउने तपाईंको विचार कति समय टिक्ला ? तपाईं आफै
भन्दिनुहोस् । सबै स्थानीय तह एउटै नहुन पनि सक्छ तर काम गर्नेलाई पनि नगरेको जस्तो बनाउने तपाईं को आँटलाई चाहिँ मान्नै पर्छ । बुझाइ र भोगाइ फरक रहेछ बुझाईमा सबै ठिक भोगाइमा सानातिना कुरामा पनि बाधा र अप्ठ्याराहरू बिचरा अवोध जनताहरू विचारको उपाहास गर्दैछन् । कुकृत्यको भण्डाफोरको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।
त्यही कुकृत्य जहाँ समालोचनात्मक कलमले मात्र लेख्न सक्छ । तर आजभोलीका कलम जसले कलममा मसी भर्दियो उसको मात्र लेख्छ । बिडम्बना कलम किन्दिनेको होइन । जनताहरूलाई दलदलमा फसायर आएको संघीयता, लुटिएको अमनचैन, वादको नाउँमा फेरिएको गणतन्त्र सामान्य जनतालाई उपाहास भएको छ । हे शासक हो ! जनताको प्रश्न पदीय दायित्व पूरा गर्ने कि भजन गाउने भजन मण्डली मात्र भर्ति गर्ने ? संघीय सरकार कुकृत्यको खोल ओडेको अखडा बनेको जनताहरू टुलुटुलु हेरिहरने ? प्रश्न र प्रतिप्रश्न ? वाद फेरिएको नाउँमा बह्मलुट ? जे काम पनि सबै सस्तो लोकप्रियताका लागि जनता धैरे बुझेका छन् । कुकृत्य, विकृति, विसंगतिलाई भण्डाफोर गर्न चाहान्छन् । कृपया साझा भावनामा समाजसेवा गर्नेलाई पाखा सारेर विचारका नाममा भ्रष्टाचार, ब्रह्मलुट, कालो बजारी, कमिशन यही चाहेको हो त जनताले ? अपराध गर्नेलाई काखा, न्याय गर्नेलाई पाखा सानालाई नियम ठुलालाई चैन यही हो त विधिको शासन ? गम्भीर मुद्दाहरू उब्जाएको यो शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापन कहिले अनि कसले गर्ला ?
हे शासक हो ! जनताका प्रतिनिधि यदी हौ भने निम्नवर्गीय जनताका लागि काम गर । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो भजनमण्डली जम्मा गर्ने अखडा होइन । विधिको शासन हो भ्रष्टलाई संरक्षण गर्ने केन्द्र होइन । सुशासन हो कुशासन होइन । जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो लुटतन्त्र होइन । हे बुज्रुक भनाउँदा काला सर्प हो ! समाजलाई यसरी नडस किनकी हाम्रो समाजमा धैरै–धैरै रूपान्तरणीय परिवर्तन जरूरी छ । साँच्चिकै रूपान्तरणीय परिवर्तन जरूरी छ ।